Ny fiteny horita na fiteny horiana dia fiteninireo Horita izay mponina niditra tao avaratr i Mesôpôtamia nanodidina ny taona 2300 tal. J.K. ary nanomboka tsy hita intsony manodidina ny taona 1000 tal. J.K. Fitenin ny fanjakan i Mitaný tao amin ny ...
I Debora na Debôrà dia mpaminanivavy izay nitsara ny Zanak i Israely tanatin ny 40 taona sady anisan ireo atao hoe mpitsara lehibe araka ny Bokinny Mpitsara. Nandimby an i Samgara izy sady nodimbasan i Gideona. Atao hoe דְּבוֹרָה / Dəḇōrāh izy am ...
I Hama na Kama dia olona resahina ao aminny Baiboly, izay voalaza fa iray aminireo zananaka lahy teloni Noa. Rahalahini Sema sy i Jafeta izy. Niaraka tamini Noa rainy mbaminireo rahalahiny sy ny vadiny ary ireo vadin-drahalahiny tao anaty sambofi ...
I Kalimantan Andrefana dia faritany Indonezianina any Andrefani Nosy Borneo. Ny velarantaniny dia 146 807 km² ary ny isam-poniny dia 3.72 tapitrisa mponina taminny taona 2000. Pontianak no renivohi-paritany.
Ny fiteny kitoba na fiteny kikôngô dia fiteny banto teneninny 50.35%nny mponina ao aminny Repoblikani Kôngô, eo anelanelani Brazzaville sy i Pointe-Noire, ary teneninny olona miisa 4 tapitrisa ao aminny Repoblika Demôkratikani Kôngô.
I Piura dia tanàna any Pero, renivohitry ny faritr i Piura. Ity tanàna ity dia 973 km miala an i Lima renivohitr i Pero. Izy no tanàna fahenina be mponina indrindra ao Pero. Miisa 421 648 ny mponina ao ary ny hakitroky ny mponina dia 679 mp /km 2 ...
Ny Baolina kitra dia fanatanjahantena mampitohitra ekipa roa misy mpilalao 11 isany avy ao anaty kianka. Ny tanjonny ekipa iray dia mametraka baolina boribory ao anatinny zava-kendrehina any aminny sahanny ekipa iray, tsy mampiasa tanana, ary mat ...
Ny sakaibe dia zavamaniry karazana sakay maniry isan-taona avy any Amerika Atsimo, tsy mafana loatra, izay misy voany miloko maitso na mavo na mena arakaraka ny fahamasahany, atao legioma. Mety mahatratra iray metatra ny sakaibe maniry. Lehibe sy ...
Ny fanjakana Inka, fantatra ihany koa aminny anarana hoe ny Fanjakana Inka, no fanjakana lehibe indrindra tany Amerika talohanny Kolumbiana. Ny foibem-pitantanana, politika ary miaramila ao aminny empira dia tao an-tanànani Cusco. Ny sivilizasion ...
I Môrônia, araka ny Bokin i Môrmôna, dia mpaminany nefita farany, mpahay tantara, sady mpibaiko miaramila, izay niaina tany Amerika tamin ny faramparan ny taonjato faha-4 sy tamin ny fiandohanny taonjato faha-5. Taty aoriana dia izy no fantatra h ...
Ny dokotra fiompy dia karazan-dokotra ompiana avy aminny taranaka ganagana dia avy any Amerika. Mena ny hodi-dohany avy any aminny foto-bavany hatrany aminny vozony, indrindra ny anny lahy. Misy kambiny sahala aminny anny vorontsiloza ny eo ambon ...
Ny valdisma na valdeisma na Fiangonana ara-pilazantsara valdesa dia Fiangonana lehibe indrindra nipoitra avy tamin ny toriteny nataon i Pierre Valdo. Io no fiangonana prôtestanta italiana voalohany izay hita indrindra ao Italia sy any Amerika Ats ...
Ny soratra dia fomba fametrahana an-tsary ny feon ny fiteny iray, amin ny alalan ny endri-tsoratra soratana na natao sary, hahafahana mifanakalo fampahalalana haingana kokoa ary tsy mila feo. Manasaraka ny Fotoana Nialohanny Tantara sy ny Tantara ...
Lionel Messi dia mpilalao baolina kitra teratany argentina, teraka tao Rosaria Argentina taminny 24 Jona 1987, ary milalao ao aminny klioba FC Barcelona sy aminny ekipam-pirenena argentina. C´ le fill du Antón Romero Messi Heverina ho anisanireo ...
Ny Fiangonana Kristadelfiana dia fiangonana Protestanta kely izay tsy mino ny Trinite. Fiangonana nipoitra taminny Adventisma ny izy.
Ny vondrom-piteny dia fianakaviam-piteny maromaro izay tsy fantatra mazava ny fihavanany. Ireto ny vondrom-piteny lehibebe. Vondrom-piteny amerindiana Vondrom-piteny papoa Vondrom-piteny paleo-siberiana Vondrom-piteny kaokaziana Vondrom-piteny ko ...
Ny fiteny pama-niongana dia fianakaviam-piteny teneninny tompon-tany any Aostralia. Io fianakaviam-piteny io dia mamondrona ny ankamaroanny fiteny aostraliana. Isanireo, ohatra, ny fiteny diirbala, ny fiteny kamilaroy, ny fiteny kokok-taiora, ny ...
Ny fiteny anatôliana dia vondrom-piteny ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, ahitana ireo fiteny maty notenenina tao Anatolia taminny Andro Taloha toy ny fiteny hitita, fiteny lovita, fiteny palaita, fiteny lidiana, fiteny likiana, fiteny ...
Ny fiteny ômôtika dia fianakaviam-piteny ao Afrika Atsinanana, ka ny ankamaroany dia tenenina ao Etiopia. Mbola iadian-kevitra anefa ny fidiranny fiteny ômôtika ho isanny vondrom-piteny hamito-semitika. Mahazatra ny fiheverina azy ho sampana andr ...
Ny fiteny tôkariana na fiteny agni-kôtsy dia vondrom-piteny ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, ahitana ireo fiteny maty telo, dia ny fiteny agneana sy ny fiteny kotseana ary ny fiteny kroraniana, izay notetenina tao aminny lemaki Tarima ...
Ny fiteny helenika dia vondrom-piteny ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, ahitana ny fiteny mikeniana, ny fiteny arkadiana, ny fiteny kipriôta, ny fiteny pamfiliana, ny fiteny grika taloha, ny fiteny grika kôine, ny fiteny grika vaovao, ...
Ny fiteny keltika na fiteny seltika dia vondrom-piteny ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, izay misampana roa, ka ahitana ireo fiteny keltika an-tanibe sy ireo fiteny keltika a-nosy. Fiteny keltika an-tanibe: fiteny gaoloà, fiteny lepont ...
Ny fiteny balta dia ireo fiteny ao aminny vondrom-piteny baltô-slava ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana. Isanizany ny fiteny litoaniana, ny fiteny letôna, ny fiteny korôniana, ny fiteny selôniana, ny fiteny semigaliana, ny fiteny skalvia ...
Ny fiteny ôsko-ômbriana na fiteny sabelika dia sampanny vondrom-piteny italika ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana. Ireto ireo fiteny ôsko-ômbriana, izay ahitana fiteny tsy misy mampiasa intsony, dia: ny fiteny ôska sy ny fiteny ômbriana ...
Ny fiteny dary, izay atao hoe fiteny persàna afgàna na fiteny farsy atsinanana, dia endriky ny fiteny persàna teneina indrindraindrindra ao Afganistàna. Ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, ao aminny sampana indô-iraniana, ao aminny zana- ...
Ny fiteny tajiky, na fiteny tôjik y, dia endriky ny fiteny persana tenenina ao Tajikistàna. Mitovitovy aminny fiteny dary izay samy endriky ny fiteny persàna io fiteny io. Ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, ao aminny sampana indô-irania ...
Ny fiteny egiptiana demôtika dia endriky ny fiteny tany Egipta taminny Andro Taloha izay nosoratana tsy taminny sora-masina, fa taminny endrika notsorina aminio soratra io. Taminny taonjato faha-7 tal. J.K. hatraminny taonjato faha-5 tal. J.K. no ...
Ny fiteny kashmiry dia fiteny ao India ao aminny sampanany fiteny indo-iraniana ao aminny fianakaviam-piteny indo-eoropeana. Tenenina ao Kashmira ny fiteny kashmiry sady soratana aminny tarehin-tsoratra arabo, izay tsy inona fa ny abidy arabo nas ...
Ny fiteny gaelika ekosey dia fiteny ao aminny sampana gaelikanireo fiteny seltika izay mikambana aminny fianakaviam-piteny indo-eoropeana. Ao Ekosy ao aminireo Tany Ambony sy ao aminireo Hebrida no tena itenenana azy. Teneninny vahoaka sasany ao ...
Ny fiteny birmana dia ao aminny fianakaviam-piteny tibeto-birmana. Fiteny ofisialini Birmania ny fiteny birmana izay tenin-dreninny olona 43 tapitrisa aminhy 55.7. Nipoitra taminny tany lempona afovoany ao aminio faritra io ny fiteny birmana, nef ...
Ny fiteny sesoto na fiteny soto atsimo dia fiteny ao aminny tapany atsimoni Afrika. Isanireo fiteny banto ny fiteny sesoto izay ao aminny fianakaviam-piteny nijero-kongoley. Ny vahoaka basoto ao Lesoto no miteny azy indrindra sady mifandray amini ...
Ivan Sutherland dia mpahay kajimirindra, injeniera, mpanoratra rindrankajy mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 16 Mey 1938 tao Hastings, Nebraska
Jacques Vallée dia mpahaikintana, mpahay kajimirindra, injeniera, mpanao asa soratra mizaka ny zom-pireneni Frantsa, Etazonia teraka ny 24 Septambra 1939
Andrew Tanenbaum dia mpahay kajimirindra, injeniera, mpanao asa soratra, mpanoratra rindrankajy mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 16 Martsa 1944 tao White Plains, New York
Christopher Strachey dia mpahay kajimirindra, injeniera mizaka ny zom-pireneni Fanjakana Mitambatra teraka ny 16 Novambra 1916 ary maty ny 18 Mey 1975
Charles Antony Richard Hoare dia mpahay kajimirindra, injeniera, mpanoratra rindrankajy mizaka ny zom-pireneni Fanjakana Mitambatra teraka ny 11 Janoary 1934 tao Colombo
Ettore Perazzoli dia mpahay kajimirindra, injeniera, mpanoratra rindrankajy mizaka ny zom-pireneni Italia teraka ny 15 Jiona 1974 ary maty ny 10 Desambra 2003
Ralph Hartley dia mpahay kajimirindra, injeniera, mpamorona mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 30 Novambra 1888 tao Nevada ary maty ny 1 Mey 1970
Gilles Kahn dia mpahay kajimirindra, injeniera mizaka ny zom-pireneni Frantsa teraka ny 17 Aprily 1946 tao Paris ary maty ny 9 Febroary 2006 tao Garches
Boris Babaian dia mpahay kajimirindra, injeniera mizaka ny zom-pireneni Firaisanny Repoblika Sosialista Sovietika, Rosia teraka ny 20 Desambra 1933 tao Baku
Eugene Roshal dia mpanoratra rindrankajy, mpahay kajimirindra, injeniera mizaka ny zom-pireneni Firaisanny Repoblika Sosialista Sovietika, Rosia teraka ny 10 Martsa 1972
Eugène Kaspersky dia mpahay kajimirindra, mpanoratra rindrankajy, mpamorona mizaka ny zom-pireneni Firaisanny Repoblika Sosialista Sovietika, Rosia teraka ny 10 Aprily 1965
Bernard M. Oliver dia mpahay kajimirindra, injeniera mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 17 Mey 1916 ary maty ny 23 Novambra 1995 tao Los Altos Hills, Kalifornia
Bashir Rameyev dia mpahay kajimirindra, injeniera mizaka ny zom-pireneni Firaisanny Repoblika Sosialista Sovietika, Rosia teraka ny 1 Mey 1918 ary maty ny 16 Mey 1994 tao Moskva
Serguéi Alekseevich Lébedev dia mpahay kajimirindra, injeniera mizaka ny zom-pireneni Firaisanny Repoblika Sosialista Sovietika teraka ny 2 Novambra 1902 ary maty ny 3 Jolay 1974 tao Moskva
Paul Allen dia mpamorona, mpahay kajimirindra, mpamoaka horonantsary, injeniera, mpitendry mozika, mpiantoka mizaka ny zom-pireneni Etazonia teraka ny 21 Janoary 1953
Ilya Zhitomirskiy dia mpiantoka, mpahay kajimirindra, injeniera mizaka ny zom-pireneni Rosia, Etazonia teraka ny 12 Oktobra 1989 tao Moskva ary maty ny 12 Novambra 2011 tao San Francisco